Amantombazane amaningi sizame ukubheka enhle njalo futhi unakekele izinzipho zabo. Kodwa kuthiwani uma zonke izindlela eyaziwa ziye wazama manicure? Kulokhu, ungazama manicure ngamanzi. Umdwebo wakhe akakaze okuphindaphindiwe.
Noma yimuphi manicure, ezenziwa professional, kuyoba amahle, kodwa hhayi nje ukubukeka kwayo kungenziwa ekhaya nge high futhi kulula. Manicure ngamanzi - lokhu ingenye ikakhulukazi ezimweni lapho ngisho amaphutha amancane izokwengeza elikhuhluziwe nezinzipho zakho.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe lolu hlobo manicure - ukuthi kungaba kokubili zakudala futhi yesiteleka, oluyisimangaliso, kuye ngokuthi umbala ekhethiwe.
Okulandelayo izolandela iseluleko manicure futhi imfundo encane.
Okokuqala nje, yebo, ukwenza manicure amahle izinga, udinga ukunikeza izinzipho zakho a fomu kubo, futhi uma babefisa, ukusebenzisa isisekelo ukuvenisha. Ukuze-ke hhayi rip off a nail umunwe, kungcono bawendlala emhlabeni nail ukhilimu amafutha - ngakho ke efika off kulula. Okulandelayo uzodinga ukukhetha ngaphezulu varnishes, okuzokwenza zixutshwe. Ungakhetha imibala ehlukene eminingi, kodwa kungcono ukuba overdo it futhi asebenzise ezimbili - ezintathu.
Lapho ekhetha upende, kufanele ucabangele ngala macebiso alandelayo for manicure:
varnishes kufanele kuqhamuka umbala;
kuyinto efiselekayo ukuthi bangabafokazi omunye inkampani;
Coatings kufanele asheshe ngelulela amanzi (lokhu kungaba ihlolwe ngokuyeka isikole iconsi emanzini ekamelweni lokushisa).
Usadinga namandla amancane (ngoqwembe ezijulile noma isitsha) ngamanzi ekamelweni lokushisa.
Qhubekisa ngokuthwebula ngqo inqubo. Manicure ngamanzi kusekelwe eqinisweni ukuthi ukuvenisha ivame ukuba kugeleze phezu futhi ingasetshenziswa ukuthola amaphethini ahlukahlukene.
On kobuso droplet amanzi aconsa lacquer kuqala. Ibhulashi akufanele ibekwe phezulu ngaphezu kwamanzi, hhayi iconsi uyokwendlala ehlukile, futhi nje emanzini amanzi. Iconsi kumelwe ngokushelela sehla futhi basakaza nge ibhulashi phezu (lokhu okushiwo lonke inqubo, uma wenza manicure ngamanzi). Khona-ke phakathi no-ukuvuza wakhe lehla omunye nail, nokunye. Umphumela kufanele kube umbuthano multi-egqinsiwe (abangaphelele, vele) ukuthi sizoqhubeka ukuyisebenzisa. Uma nganoma isiphi isikhathi unomuzwa wokuthi mbuthano mncane kunjalo, kungenzeka ukuthi kancane nithintithe amanzi (kakhulu kancane!) Ukuqinisekisa ukuthi liye landa, futhi ngemva kwalokho olandelayo ukuvuza iconsi.
Khona-ke kumelwe athathe Wand ukwenzela ukungena okuncane kakhulu, kungaba inaliti noma ibhulashi. Lokhu Wand izoveza amaphethini, eziqala emaphethelweni embuthanweni, njengoba kuboniswe figure. Ngakho kungenzeka ukuba enze izinqumo ezimbalwa ezahlukahlukene yamaphetheni isipikili. Ungakwazi ukuchitha imigqa embalwa, kodwa musa ikakhulukazi abashisekayo, kungenjalo nail kuyoba ndawo, kuzwakala okuqinile ezingeke ngokuthi iphethini noma isithombe.
Ngemva umdwebo kwendilinga kuqedile, ngobumnene agcobhoze umunwe nenqwaba ewumphumela. Ngakho kubalulekile ukuzama ezipikili waqale wangena amanzi bacwilisa ngokugcwele kuwo. Donsa umunwe wakho ephuma emanzini, futhi izinsalela ukuvenisha nokuwohloka unhook induku (izobukeka ku ifilimu). Nge isikhumba nge uvolo ngobumnene ukusula ukuvenisha. Manje ungakwazi ukujabulela imiphumela nobuhle oyowunikela manicure ngamanzi.